မန်ယူနိုက်တက် vs အာဆင်နယ် ၊ မာဆေးဆိုက်ဒါဘီ?? မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၁၄ ခန့်မှန်းချက်များ - xyznews.co
မန်ယူနိုက်တက် vs အာဆင်နယ် ၊ မာဆေးဆိုက်ဒါဘီ?? မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၁၄ ခန့်မှန်းချက်များ
၁~အဲဗာတန် vs လီဗာပူး
လီဗာပူး အသင်းဟာ ယခုနှစ် အစောပိုင်းက အန်ဖီးမှာ အဲဗာတန်တို့ သူတို့ အပေါ် အနိုင်ယူသွားခဲ့တဲ့ အပေါ် ဂွတ်ဒီဆင်ပက်မှာ လက်စားချေဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေမှာပါ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက လီဗာပူးဟာ ဒဏ်ရာပြသနာတွေနဲ့ အတူ ဆိုးရွားတဲ့ကာလကို ဖြတ်သန်းနေရချိန် ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ ဗန်ဒိုက် ကြံံ့ခိုင်မှု ပြည့်ဝနေခြင်းနဲ့အတူ အလက်ဇန်းဒါးအာနိုး ကလည်း အကောင်းဆုံး ပုံစံ ရရှိနေတာကြောင့် အိမ်ရှင်အသင်း အတွက် တအားကို ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။
လီဗာပူးဟာ ဒီအချိန်မှာ ဂိုးသွင်းနှုန်းကောင်းမွန်လျက် ရှိနေပြီး အကယ်၍ မာနေး ဂျိုတာ ဆာလား တို့သာ ပုံစံကောင်း ပြသနိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ဧည့်သည်အသင်းတို့ နောက်ထပ် နိုင်ပွဲတစ်ပွဲ ရသွားလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် : 1-2
၂~အက်စတွန်ဗီလာ vs မန်စီးတီး
စတီဗင်ဂျာရတ်ရဲ့ လက်အောက်မှာ အက်စတွန်ဗီလာဟာ ၂ ပွဲကစား ၂ ပွဲစလုံး နိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ရိန်းဂျား ကနေ ဂျာရတ် ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်း ဗီလာပက်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ခံစားချက်တွေ လွှမ်းခြုံနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လက်ရှိမှာ အကောင်းဆုံး ပုံစံ ရနေတဲ့ မန်စီးတီးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတာဟာ အရမ်းကို ခက်ခဲတဲ့ စမ်းသပ်မှု ဆိုတာတော့ သေချာပါတယ်။
ဗီလာဟာ အိမ်ကွင်းမှာ ကောင်းစွာ တိုက်ပွဲဝင်သွားလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် မြင်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း စီးတီးရဲ့ တိုက်စစ်ဟာ တအားကို ကောင်းလွန်း နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်ကတော့ စီးတီးတို့ ၂ ဂိုး အသာလောက်နဲ့ နိုင်သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် : 1-3
၃~တော့တင်ဟမ် vs ဘရန့်ဖို့ဒ်
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က ဘန်လေနဲ့ ပွဲစဉ်ကို ရွေ့ဆိုင်းလိုက်တာကြောင့် စပါးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က မော်ရာကို အရှက်ရဖွယ် ရှုံးနိမ့်မှုကို ဆုပ်ကိုင်ထားနေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လိဒ်ကို နိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါးကွင်းရဲ့ atmosphere ဟာ အရမ်းကို ကောင်းမွန်ခဲ့ပြီး ဒီပွဲစဉ်မှာလည်း စပါးဟာ ပရိတ်သတ် အကြိုက် တိုက်စစ်ဆင် ကစားသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဒီအသင်းကို အန်တိုနီယိုကွန်တီ ကောင်းကောင်း မောင်းပေးနိုင်မှသာ ဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ သူ ဒီလို လုပ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စပါးဟာ တန်ပြန်တိုက်စစ်တွေ ကနေ ပြိုင်ဘက်ကို အခွင့်ကောင်း ယူသွားပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အိမ်ရှင်တို့ နိုင်သွားမယ်လို့ ရွေးချယ်ပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် : 2-0
၄~ဝက်ဖို့ဒ် vs ချဲလ်ဆီး
ဝက်ဖို့ဒ်ဟာ ဗီကာရေ့ချ်ရုတ်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ် leaders ချဲလ်ဆီးကို လက်ခံ ကစားသွားရမှာ ဖြစ်ပြီး နည်းပြရာနေရီ ကတော့ နောက်ထပ် အသင်းဟောင်းကို ရင်ဆိုင်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချဲလ်ဆီးဟာ မန်ယူနိုက်တက်နဲ့ အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်မှာ ရမှတ် ၂ မှတ် ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး မန်စီးတီးနဲ့ လီဗာပူး တို့နဲ့ သူတို့နောက်ကနေ နီးကပ်စွာ ဖိအားပေးနေတာကို ကောင်းကောင်း သိနေမှာပါ။
ဝက်ဖို့ဒ်ဟာ ရာနေရီရဲ့ လက်အောက်မှာ ခြေစွမ်း တိုးတက်လာခဲ့ပေမယ့် ဒါဟာ လုံး၀ ခြားနားတဲ့ စမ်းသပ်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သွင်းဂိုး ကွာခြားမှုတော့ အရမ်းကို ကြီးမားနေလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဧည့်သည် အသင်းဟာ ရမှတ် ၃ မှတ်နဲ့ အိမ်ကို ပြန်သွားလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် : 0-2
၅~မန်ယူနိုက်တက် vs အာဆင်နယ်
မန်ယူနိုက်တက် vs အာဆင်နယ် ပွဲစဉ်ဟာ အမြဲတမ်း သတင်းခေါင်းကြီးတွေမှာ နေရာယူလေ့ ရှိတဲ့ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်ဖ်ရန်းနစ် ရောက်လာပြီ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဒီပွဲမှာတော့ သိပ်ပြီး ခြားနားမှု မရှိနိုင်ပါဘူး။ မန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ ကစားဟန်ဟာ ဘာလဲဆိုတာကို နားလည်ဖို့ အခုထိ ခက်ခဲနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျာမန်နည်းပြဟာ သူတို့ကို အများကြီး စုစည်းမှုကောင်းစေမယ့် အပြင် အထူးသဖြင့် set plays တွေ ပိုအားကောင်းစေမှာပါ။
အာဆင်နယ် ကတော့ အာတီတာရဲ့ လက်အောက်မှာ တိုးတက်မှုတွေ ရှိလာခဲ့တာတော့ အသေအချာ ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း အသင်းချင်း ယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် သူတို့ဟာ မန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ နောက်မှာ အနည်းငယ်ရောက်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ကျွန်တော်ကတော့ သရဲနီတို့ အိမ်ကွင်းမှာ နိုင်သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် : 2-1
နယူးကာဆယ် ၂-၀ နော့ရစ်ချ်
လိဒ် ၁-၁ ခရစ်စတယ်ပဲလေ့စ်
ဆောက်သမ်တန် ၁-၂ လက်စတာ
ဝုဖ် ၁-၀ ဘန်လေ
ဝက်ဟမ်း ၂-၁ ဘရိုက်တန်
Previous Article ဒီနှစ် ရွှေဘောလုံးဆုကို မက်ဆီ ရဖို့ မထိုက်တန်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်ကြတဲ့ တိုနီခရူးစ် နဲ့ ကာဆီးလက်စ်
Next Article အာဆင်နယ်နဲ့ ပွဲစဉ်မတိုင်မီ မန်ချကစတာ ယူနိုက်တက် အသင်းမှ ဒဏ်ရာရ ကစားသမားတွေရဲ့ အခြေအနေများ